‘अब त मलाई पनि विवाहको रहर जागिसक्यो’ | Ratopati
बिहीबार २० फागुन, २०७७ Thursday, 04 March, 2021
‘अब त मलाई पनि विवाहको रहर जागिसक्यो’
personकुवेर गिरी exploreकाठमाडौं access_timeमंसिर २४, २०७७ chat_bubble_outline0
गायिका ज्योति मगर पछिल्लो समय ‘डान्सिङ विथ दि स्टार्स नेपाल’का कारणले चर्चामा छिन् । उक्त शोमा उत्कृष्ट ५ भित्र पुगेर हालै बाहिरिएकी छन् । शोमा विभिन्न शैलीका नृत्य प्रस्तुत गरेको कारण चर्चाको केन्द्रमा रहेकी उनले शोमार्फत् आफुलाई बहुमुखी प्रतिभाकी धनीको रुपमा समेत आफू चिनाउन सफल भएकी छन् ।
लोकगायिकाको रुपमा चर्चित उनी म्युजिक भिडियो अभिनय तथा स्टेज पर्फमेन्समा बोल्ड अवतारको कारण पनि चर्चामा हुन्थिन् । त्यसैले त ‘डान्सिङ विथ दि स्टार्स नेपाल’ उनी आफ्नो छवि परिवर्तन गर्न मात्र शोमा उनी सहभागी भएको आरोप पनि लाग्यो । उनी भने आफुमा रहेको बहुमुखी प्रतिभा प्रस्तुत गर्न शोमा सहभागी भएको बताउँछिन् । शोबाट बाहिरिएपछि नयाँ गीतसंगीतको तयारीमा रहेकी गायिका मगरसँग गरिएको कुराकानीको केही अंश ।
– ‘डान्सिङ विथ दि स्टार्स नेपाल’ शोमा व्यस्त रहेको थिएँ । केही दिनभयो त्यहाँबाट बाहिरिएको छु । अब भने फुर्सद भएको छ ।
प्रतियोगिताको उत्कृष्ट ५ मा पुगेर बाहिरिनु पर्दा कस्तो अनुभूति भयो ?
–प्रतियोगिता जित्छु नै भनेर म सहभागी भएको थिएँ । प्रतियोगिता अगाडि बढ्दै जादा टप कम्पिडिसन पनि हुन थालेको थियो । त्यसका लागि पनि म तयार थिएँ । प्रतिस्पर्धा पनि गरेकै हो । तर, भोटिङले पनि यसमा प्रभाव पार्दाेरहेछ । मेरो भोटिङका संख्या कम भयो । आफुले त शतप्रतिशत दिँदादिदै भोटिङले असर गर्यो ।
प्रतियोगिताले चर्चा त धेरै दिलायो नि हैन र ?
–कोरोना महामारिले गर्दा सबै क्षेत्र सेलाएको बेलामा प्रतियोगिताले धेरै चर्चा दिलायो । कोरोनाको यो समय पनि पुरै सदुपयोग भयो । प्रतियोगितामार्फत् सबैले मेरो फरक छवि पनि देख्न पाउनुभयो । यो प्रतिभा मैले देखाउने प्ल्याटफर्म अहिलेसम्म पाएको थिइनँ । भिडियोमार्फत् केही देखाउन कोसिस गर्दागर्दै पनि देखाउन पाएकी थिइनँ । त्यो मौका यसमा मिल्यो ।
बिग्रिएको छवि सुधार्न ज्योति प्रतियोगितामा सहभागी भएकी हो भन्ने आरोप पनि छ नि ?
– प्रतियोगितामा भाग लिने समय यतातिर मैले केही सोचेको थिइनँ । फेरि दर्शकले मेरो भिन्न खालको छवि मनपराउनु हुन्छ भन्ने बुझेको पनि थिइनँ । अचानक यो सबै कुरो भैदियो । मेरो लागि यो राम्रो कुरा पनि हो ।
सिकाइको रुपमा कस्तो रह्यो प्रतियोगिता ?
– मेरो विचारमा जीवनको हरेक पल एक किसिमको सिकाइ नै हो । अनुभूति मात्र फरक–फरक हुने हो । धेरै मिहिनेत, समयको महत्त्वलगायत बुझ्न सकेँ ।
तपाईंका गीतसंगीत बाहिर नआएको धेरै समय भयो नि ?
– हो । कोरोना कहरको सुरुका समय ४ महिना म गाउँमा गएर बसेँ । त्यसपछि फर्कदा तीजको गीतहरुको लहर चलिरहेको थियो । त्यसैले ४–५ वटा तीजको गीत गाए । त्यसपछि ‘डान्सिङ विथ दि स्टार्स नेपाल’ प्रतियोगीताको अभ्यास सुरु भयो ।
उत्कृष्ट ५ सम्म आइपुग्दा धेरै समय यसमा बितेको पत्तै भएन । अहिले बल्ल फ्री भएँ । अब, छिटोभन्दा छिटो श्रोता दर्शकले मेरो नयाँ गीतसंगीत पाउनु हुनेछ ।
देश विदेशका मेला, महोत्सव, स्टेज कार्यक्रममा सधैँ व्यस्त रहने तपाईं, कोरोनाको कहर र त्यसका कारणले सिर्जित लकडाउनका समय बिताउन गाह्रो त पक्कै भयो होला ?
– दिन त जसोतसो कटेको छ । रमाइलोसँग दिन काट्न भने पाइएको छैन । हामी विभिन्न कार्यक्रम, मेला महोत्सवमा जाँदा भिडभाडमा गीत गाउँदा हुने सन्तुष्टि, पारिश्रमिक बुझ्दा हुने सन्तुष्टिलगायत धेरै कुरो मिस भएको छ । गीत गाउन नपाएर ‘सिक’ भएकी छु अहिले । गीत गाउँदा पाउने सन्तुष्टि मैले नृत्य र अन्यबाट कहिलै पनि पाउदिनँ ।
व्यक्तिगत जीवनमा कोरोनाले के असर गर्यो ?
– सिधा रुपमा आर्थिक असर भइहाल्यो । एउटा रफ्तारमा रहेको करियरमा पनि यसले एक किसिमको धक्का दियो । आर्थिक अवस्थामा असर पर्ने बितिक्कै हामीले खुलेर संगीतमा लगानी गर्न, चाँडो ल्याउन सक्दैनौँ । यस्तो माहोलमा बाहिरको गीत पनि कम हात पर्छ ।
हाम्रोभन्दा पनि कोरोनाले मजदुर वर्गमा पारेको असर देख्दा म मानसिक रुपमा झन् विक्षिप्त भएकी छु ।
कार्यक्रम तथा म्युजिक भिडियोमा देखिने तपाईंको खुल्लापनालाई मानिसले अश्लील, छाडा लगायत उपनामले सम्बोधन गर्ने गरेका छन् नि ?
– सागर कति गहिरो छ भन्ने कुरो मानिसले त्यसमा हाम नफलेसम्म थाहा पाउन सक्दैन भने जस्तै हो यो । त्यो मेरो तर्फबाट एउटा मनोरञ्जनको पाटो हो । स्टेजमा डान्स गरेर गीत प्रस्तुत गर्दा जुन ड्रेसअप सहज हुन्छ । त्यो गर्ने हो मैले ।
साडी लगाएर प्रस्तुत हुने बित्तिकै मलाई असहज हुन्छ । असहज हुने बित्तिकै अरुलाई मनोरन्जन गराउन सक्दिनँ म । त्यो कुरा मलाई आरोप लगाउनेले बुझ्न नचाहनु भएको हो । यस्ता कुरामा मैले सबैलाई जवाफ दिएर पनि सक्दिनँ ।
गायिकाको रुपमा रहँदा राम्रो थियो ज्योति, म्युजिक भिडियो अभिनय गर्न थालेपछि बिग्रियो भनेर पनि भन्छन् ?
– त्यो मानिहरुको हेर्ने नजर हो । जसरी पनि हेर्न सक्छन् । भिडियो अभिनय गर्नु भनेको मोडलिङ गर्नु हो । त्यसले मलाई प्लस गरेको हो । म सानैदेखि नाच्ने, ड्रामा गर्ने खालको थिएँ । यी सबै चिज मैले छोड्न नसकेको पनि त हो ।
विवाह पछि सुध्रिन्छ ज्योति भन्छन् नि ?
– पहिलो कुरो म सुध्रिन्नँ । किनभने सुध्रिनका लागि बिग्रनु पर्छ । म बिग्रिएको छैन । मानिस जन्मदै एउटा नेचर लिएर जन्मिएको हुन्छ । त्यो उसले मरेर पनि लान्छ । यसलाई विवाहलगायत कुनै पनि समय र परिस्थितीले रोक्न सक्दैन ।
यो मेरो नेचर मसँग रही रहन्छ । म ५ गलत मानिसको कुरा सुन्ने भन्दा पनि एक सही मानिसको सङ्गत गर्ने गर्दछु । समय र परिस्थिति अनुसार भने चल्छु ।
फ्यानले विवाह कहिले हेर्न पाउने ?
– अब त मलाई पनि विवाहको रहर जागिसक्यो । मंसिरको महिना फेसबुक लगायत जताततै विवाह देख्दा मलाई धेरै रहर लागेको छ । मन मिल्दो, राम्रो बर पाएँभने जुनै समय पनि हुनसक्छ विवाह । भनेको जस्तो बर पाइनँ भने कहिलै पनि नहुन पनि सक्छ ।
कस्तो वरको चाहना हो ?
– मुख्य कुरो आफ्नो खुटमा उभिएको हुनुपर्यो । सामाजिक हुनुपर्यो । व्यवहारिक पनि हुनुपर्यो । महिलालाई सम्मान गर्ने हुनुपर्यो । मेरो पेसा बुझेको हुनुपर्यो ।
चर्चा र सफलतालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
– यो क्षणिक चिज हो । मुख्य कुरो मानिसको संघर्ष हो । जबसम्म मानिसमा श्वास चल्छ, तबसम्म संघर्ष जारी रहन्छ । हिजो चर्चित हुनका लागि संघर्ष थियो, आज चर्चित भएपछि पनि टिकिरहन त्यस्तै संघर्ष छ । भोलि फेरि अर्काे संघर्ष हुनेछ ।
नयाँ गीतसंगीत कहिले आउँछ ?
– गीतलगभग तयार छ । छिटोभन्दा छिटो ल्याउने तरखरमा छु ।
पछिल्लो समय लोकदोहोरीको अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ?
– अहिलेको मेरो बुझाइ लोकदोहोरी क्षेत्र एकदमै धनी रहेछ । यसका लागि अहिले ८–१० लाखसम्म खर्च गरेर भिडियो बनाइरहेका छन् । अर्काे कुरो यसले कलाक्षेत्रका ७५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसलाई यतिबेला पालेको छ । हिजो चलचित्र गरेर ठीकै आम्दानी गर्ने कलाकारहरु अहिले भिडियो अभिनय गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । घर गाडी जोडेका छन्, सम्पन्न भएर हिँडेका छन् । लोकदोहोरी क्षेत्रको मानिसको मनपनि ठुलो छ । फाइदा नहेरेर पनि यो क्षेत्रकालगातार काम गरिरहेका छन् ।
तस्विरहरु : ज्योति मगरको फेसबुकबाट
अभिनेत्री उपासनाले उद्घाटन गरिन् ऐजुकेसन एण्ड माइग्रेसन कर्नर
‘लिटिल प्रिन्स एण्ड प्रिन्सेस’ का लागि ७० प्रतियोगी छनौट
सिन्धुको नयाँ गीत ‘सुपारी काँचो’
‘आँधी तुफान–२’ निर्माण घोषणा
‘मिरर’मा आर्यन र उपासना
सैफ र अमृताले किन तोडेका थिए १३ वर्ष लामो वैवाहिक सम्बन्ध ?
सुनको आपूर्ति बढाउन पहल गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता
भदौमै तयार थियो विप्लवसँगको ३ बुँदे सहमतिको खाका
विप्लवका दाइ चन्द्रबहादुर सहित १ सय ४४ जनालाई छाड्ने सहमति
‘मिसेस नेपाल ग्ल्याम’ आयोजना हुने
सम्झना हत्याकाण्ड : देवर-भाउजु मिलेर बुहारीको हत्या
ज्योति विकास बैंकद्वारा अस्पताललाई सहयोग
अफगानिस्तानमा हवाई कारबाही, २३ तालिवान लडाकू मारिए
सकसपूर्ण अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र, ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिदर हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल
‘सुरुङ परीक्षणका क्रममा वाग्मती नदीमा सतह बढ्नसक्छ’